मुन्नीलाई पर्खेर बसेका दर्शकले भद्रगोल हेर्न किन पाएनन् ? यस्तो रहेछ भद्रगोल नआउनुको कारण
५ श्रावण २०७६, आईतवार १५:०२
काठमाडौं – नेपाल टेलिभिजनवाट प्रशारण हुने चर्चित टलिहाँस्य श्रृंखला मध्ये एक भद्रगोल पनि हो । हरेक शुक्रबार नेपाल टेलिभिजनवाट प्रशारण हुने यस हाँस्य श्रृंखला गएको शुक्रबार भने प्रशारण भएन । हाँस्य श्रृंखला भद्रगोल प्रशारण नभएपछी दर्शकहरु निकै निराश भएका छन् । धेरैले अति नै रुचाएको हाँस्य श्रृंखला भद्रगोल गएको शुक्रबार नआउनुको कारण भने खुलेको छ ।
हाँस्य श्रृंखला भद्रगोलका निर्देशक कुमार कट्टेल जिग्रीले प्राबिधिक कारणले भद्रगोल गएको शुक्रबार नआएको जानकारी दिए । क्यानडा नेपालसँगको कुराकानीमा उनले अर्थिक बर्ष परिबर्तन भएसँगै उत्पन्न प्राबिधिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले गएको शुक्रबार भद्रगोल प्रशारण नभएको बताए । आउदो शुक्रबार पनि भद्रगोल प्रशारण हुनेमा शँका उत्पन्न भएको छ । निर्देशक जिग्रीले भने ‘सम्भब भएसम्म आउदो शुक्रबार प्रशारण गर्नेछौ ।’
निर्देशक जिग्रीको भनाईलाई बल पुग्ने गरी भद्रगोलका कलाकार सुबोद गौतमले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । उनले उक्त स्टाटसमा नयाँ आर्थिक बर्षको शुरुवात सँगै भद्रगोल सर्जक र मिडिया एजेन्सी बिच नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले गएको शुक्रबार भद्रगोल प्रशारण नभएको बताएका छन् । उनले स्टाटस मार्फत भद्रगोल सर्जक र मिडिया एजेन्सी बिच नयाँ सम्झौता नहुन्जेल अबको केही हप्ता भद्रगोल नआउने बताएका छन् । यस्तै भद्रगोलमा पछिल्लो समय एक नयाँ कलाकार निकै चर्चामा छिन् । गएको भद्रगोलको दुई भागमा लगातार देखिएकी मुन्नी अर्थात प्रियाना आचार्य भद्रगोलमा नदेखिदा दर्शक निकै निराश भएका छन् । भद्रगोलमा मधेसी लवजमा बोल्ने मुन्नीको सुन्दरता र अभिनयलाई धेरैले मन पराएका छन् ।
हलिउडको यस फिल्ममा मुख्य भूमिका निभाउदै प्रियंका चोपडा
कृष्ण जन्माष्टमीमा दर्शकलाई नायिका नम्रताको जाइरा
विश्वकै सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने सूचीमा परे अक्षयकुमार, कमाई सुन्दा नै चकित परिन्छ
नायिका तथा निर्देशक झरना थापाले बनाउदै ‘ए मेरो हजुर ४’, नायिकामा सुहाना, नायक को ?
रेखा थापाको जन्मदिनमा सरप्राईज केक सहित जब नायिकाहरु पुगे